आवरणका निर्देशक सुवास कोइरालाले भने – ‘हामीले चलचित्र फरक वनाएकै छौं’ -Nagarikaawaj.com
आवरणका निर्देशक सुवास कोइरालाले भने – ‘हामीले चलचित्र फरक वनाएकै छौं’
एउटा मान्छेको बाहिरी खोल वा रुप र भित्री रुपमा कस्तो फरक हुन सक्छ भन्ने मूल कथालाई आधारित बनाइ निर्माण गरिएको चलचित्र ‘आवरण’ का निर्देशक हुन सुवास कोइराला । जेष्ठ २ देखि अल नेपाल रिलीजमा आउन लागेको चलचित्र युनिटको टोली यतिबेला देशदौडाहामा पनि छ । यसै क्रममा चलचित्रका केही पक्षका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशक सुवास कोइरालासँग नागरिक आवाज डट कमका लागी रामजी ज्ञवालीले कुराकानी गर्नुभएको छ, प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश । संः
‘अपवाद’ पछि आवरण निर्माण गर्नुभयो, अपवाद त्यत्ति चलेन आवरण पनि उस्तै हुने त हैन ?
– बाहीरी आवरणमा तपाईलाई लाग्न सक्छ अपवाद त्यत्ति चलेन । तर भित्री आवरण त्यस्तो हैन । अपवादको लगानी पूरा हाम्रो हातमा आएको छ भने केही नाफासमेत हामीले निकालेका थियौं । चलचित्र अपवाद् राम्रो चलेकैले हामी अहिले आवरण निर्माण गरेका हौं । तरपनि कुनै घमण्डबिनानै भन्न सक्छु हाम्रो चलचित्र अन्य कुनै पनि चलचित्रको एक प्रतिशत कपी छैन । पूरै फरक बनाएका छौं ।
‘आवरण’ फिल्म दर्शकले मन पराउने र यसले लगानी उठाउने विषयमा पूरा कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ ?
– हामीले नेपाली चलचित्र उद्योगमा जुन किसीमले फिल्म बनाइएका छ, जुन खालको कथावस्तुमा बढी चलचित्र बनाइन्छ त्यो भन्दा अलिकति भएपनि माथि उठेर आवरणको निर्माण ग¥यो । अझ भनौं एक खालको रिक्स पनि बोकेरै काम गरेका छौं । यो रिक्स अथवा डर भनेको टेक्निकल पार्टमा चलचित्रलाई बढी फोकस गरेका छौं । टेक्निकल फिल्म भएकाले चाहिं हलिकति डर चाहिं पक्कै छ । खासगरी नेपाली सिनेमाको ग्राफिक्स पार्टमा केही माथि उठेर चलचित्र बनाएका छौं । आशा छ निराशा चलचित्रले बनाउने छैन ।
सांच्चीकै आवरण चलचित्रले के सन्देश दिन चाहेको छ ?
– सन्देश भन्दा पनि यसले पूरा मनोरन्जन दिन चाहेको छ । यो कस्तो खालको चलचित्र हो भनेर पूरा नभनौं । किनकि चलचित्र धेरै सस्पेन्स छ । यस बाहेक थ्रिलर र हररले भरिपूर्ण छ । मलाई लाग्छ आवरण हेर्न पुग्ने दर्शकले पैसा तिरेको पछुतो पर्ने छैन । चलचित्रमा कलाकारहरुको अभिनय जीवन्त छ । संगीत धेरै राम्रो छ । ब्याकग्राउण्ड म्युजिक राम्रो छ । गीत पनि राम्रो छ । चलचित्र पनि राम्रै बन्नेछ आशा गरेका छौं ।
अहिलेसम्म कति चलचित्र बनाइ सक्नुभयो ?
– यसअघि अपवाद बनाए । त्यसपछि अहिले आवरण र लगत्तै पुन्टे परेड नामको चलचित्रको निर्माण गर्ने सोंच बनाएको छु । हेरौं, समय र भाग्यले साथ दिएसम्म चलचित्र निर्माण गर्नेछु ।